Molife Sense 500 smartwatch ongororo: Hauna mari yeApple Watch? Edza izvi panzvimbo
Iyo Apple Watch ndiyo yepamusoro peiyo smartwatch tekinoroji uye vashoma kwazvo vanouya padhuze nekupa chiitiko chinoitwa neAppiz-gizmo. Kupfuura ruzivo, ndiyo ecosystem iyo Apple inotengesa kune vatengi vayo iyo yaita iyo Apple Watch imwe yeakanakisa-anotengesa smartwatches pasi rese.
Nekudaro, havazi vese vane homwe dzakadzika zvakakwana kuisa mari muzvigadzirwa zveApple, ndoda Apple inotanga muIndia paRs 21,000 (Series 3).
Asi ko kana ndikakuudza kuti pane smartwatch isingangofanana neApple Watch chete asi zvakare inopa chiitiko chakada kufanana uye icho zvakare pasi peRs 4,500. Chii chaizoti?
Tarisa uone! Iyo Molife Sense 500.
Sekunyengedza sezvazvinogona kuratidzika kunge kure, iyo Sense 500 ine yakafanana nemashiripiti yakafanana neApple Watch (kubvisa iyo inotenderera dial) zvinova zvakasimudzira kufarira kwangu. Chii chingaitwe neApple Watch kubvarura zvirinani pane yekutanga? Ungave uchitambisa zvachose mari yako kutenga smartwatch yakadai paRs 4,449? Kuti tiwane mhinduro isu takashandisa chishandiso kwemavhiki mashoma uye heino ongororo yedu yeMolife Sense 500 smartwatch.
Iyo haina brainer iyo iyo Sense 500 inotaridzika yakafanana neApple Watch. Kunze kwekorona inotenderera inopihwa neApple gizmo, iyo Sense 500 inongouya nebhatani kuruboshwe iro rinogona kungoshandiswa kudzokera kumashure, kudzima skrini uye kudzima chishandiso.
Iyo Sense 500 inouya neyakareruka simbi zinc-alloy kupera kweiyo furemu uye kumashure kunowana kupenya kwakapenya iyo inorumbidza iyo yakazara dhizaini. Kutarisa grille yekuruboshwe kuruboshwe hakuzove dambudziko uye maikorofoni yakaiswa pasi pebhatani kurudyi. Pakazara, pasuru yakavanzika iyo inoburitsa minimalism.
Tambo dzekutarisa dzinoita sedzakanaka mhando yesilicone, asi ingadai yakave yakanaka dai kambani iyi ingadai yakapa tambo diki kune vanhu vane zviuno zvidiki. Zvakare, pamakumi matatu nemashanu chete magiramu, zvakasununguka kuichengeta yakasungwa kwemaawa marefu.
Iyo Sense 500 mitambo 1.7-inch inoratidzira ine 2.5D girazi rakakombama. Iko hakuna gorilla kudzivirirwa kwegirazi, uye iri nyore kune yakawanda kukwenya uye smudges saka iwe uchafanirwa kuve wakangwarira uchishandisa iyi wachi. Ini ndinofarira iyo yekuti iyi yekumucheto-kune-kumucheto yakazara maonero ekuratidzira uye kwete imwe yeaya mafuta-bezel ekuratidzira atinowanzoona pane bhajeti smartwatches.
Pane pixels 240 × 240 chete, resolution yacho haisi yakanakisa kana ichienzaniswa nemamwe mawatchwatches kunze uko asi haina kuipa zvakare. Iwe zvakare unowana kugadzirisa kupenya, asi ingadai yakave yakanaka kana ikapa ambient light sensor.
Kuverenga zvemukati pane smartwatch kunogona kunetsa pasi pezuva rakananga ndipo pandakatambura zvakanyanya. Kunyangwe iwe ukashandura kupenya kumusoro matambudziko ako haasati apfuura.
Kuita uye UI
Iyo kambani haina kusiya chero dombo risina kuvhurwa kuyedza kuita kuti iyo UI ruzivo ive padhuze neWatchOS. Svipe yakasiiwa kubva kuchiratidziro chekumba inokutora iwe uende-huchi-dhizaini yekushandisa dhirowa inova kopi-peta basa reWatchOS. Kunyange zvidhori zvinotaridzika zvakafanana. Vanhu vasiri mafeni eWatchOS vanofanirwa kubva paSense 500, zvisinei, ruzivo rwangu neUI rwainakidza. Iwe zvakare unowana iyo sarudzo yekuchinja iyo app dhirowa kune yakatwasuka yakaiswa menyu masitayera.
Iko kune kunonoka kudiki kana iwe uchichinja kubva kune imwe skrini uchienda kune imwe asi izvo hazvisi zvinokanganisa kumeso. Svetera pasi kubva kumusoro inokuendesa iwe kunzvimbo yekudzora kuti uchinje kupenya, shandisa torch nezvimwe. Swipe kuruboshwe inokutorera akawanda mawijeti senge nhanho kuverenga, yekurara tracker uye kunyangwe iyo pad pad.
Ehe, iyo Sense 500 inouya nekufona kugona uye iwe unogona kufona uchishandisa wachi. Izvo hazviuye neyakavakirwa-muSIM pane vashandisi veBluetooth kubatana neiyo smartphone. Hunhu hwekurira kuburikidza nevatauri hwakanaka (infact zvinopfuura zvakanaka) uye neruzha rwakakwana kuti iwe uite hurukuro nekungoshandisa wachi.
Iyo wachi inopawo mimhanzi inodzora, uye iwe unogona kushandisa wachi seyutauri kuburitsa kumumhanzi. Kwete kutaura kuti ndinokurudzira kutamba mimhanzi kubva kuwachi asi sezvo iine ruzha serunhare, kuve nemimhanzi-uchitamba smartwatch haisi yakaipa pfungwa.
Iwe unofanirwa kubatanidza wachi kune foni uchishandisa iyo Da Fit app iyo inowanikwa paGoogle Play Chitoro uye inogona zvakare kudhawunirodwa nekupenengura QR kodhi inowanikwa mubhokisi. Iyo app inowirirana nefoni yese inotsigira Android 4.4 uye pamusoro uye iOS 9.0 uye pamusoro.
Iyo shamwari yeapp haina kupa yakawanda maficha, asi ine izvo zvekutanga senge moyo-rate yekutarisa, nhanho uye yekurara yekutevera yakavharwa. Iwe zvakare unowana SpO2 muverengi uye yeropa kuongorora system. Vakasungwa muhwindo vane vakazvitsaurira zviitiko zvevateereri kune akawanda mafitness zviitiko sekumhanya, kusvetuka, kuchovha bhasikoro uye kunyangwe mitambo sebhola, badminton, basketball nezvimwe. Sezvo iyi iri IP86 isina mvura smartwatch, iwe unogona zvakare kuitora kuenda kudziva kunoshambira.
Sezvo mazhinji emadziva emunharaunda medu akavharwa nekuda kwe COVID, ini ndakangonyudza ruoko rwangu mubhaketi rizere nemvura kuyedza izvi. Iyo wachi yakapona pakunyudza nemavara anobhururuka kunyangwe amai vangu vaisahadzika nehunyanzvi hwangu hwekuyedza chimwe chinhu chakadai mukati meimba.
Chiitiko chekutevera chaive chinetso. Pane imwe nguva ini yandakatanga iyo timer uye ndikatanga yangu yekurovedza muviri iyo skrini yakadzimwa uye iyo timer inogadzirisazve dzimwe nguva. Kwete izvozvo chete, iyo yekupedzisira timer kuverenga muwatch ndeye 3 mins, 5 mins, 10mins zvichingodaro. Ko kana ini ndichida kugadzirisa yangu timer kwemaminetsi manomwe? Hapana sarudzo ipapo.
Zvakare, iyo yekuverenga nhanho kana kumhanya tracker haina kuvimbika. Pandakanga ndakagara pacheya uye ndichikwenya ruoko rwangu ndakakwanisa kuvhara 100 metres sekuenderana newatchwatch. Asi zvakare, kunyangwe iyo Apple Watch haina kuvimbika nenzira iyoyo. Tichifunga nezve Sense 500 inouya pasi peRs 5,000, iri diki bakoat haifanire kunge iri chibvumirano.
Vamwe vashandisi vanogona zvakare kumhanyisa mumatambudziko ekubatanidza neichi chigadzirwa sezvo pachave nekukanganiswa kana uine akawanda madhijitari akabatana. Ndingangopa zano kuti iwe usabatanidze iyo Sense 500 yekuburitsa odhiyo nguva dzese sezvo iwe waisazoda kuti nyika izive nezve zvese 'zvakakosha' zvemukati zvaunotarisa pafoni yako. Nguva zhinji odhiyo yangu yefoni yaiuya ichibva kuwatch kunyangwe pandakanga ndakabatana nekaviri keBluetooth nzeve. Iva wakarinda nyaya yakadai.
Chinhu chandaifarira ini pachangu yaive yakatsaurwa kamera shutter pane wachi. Nekudaro, iyo wachi inotora foni kune imwe kamera kamera kutora mifananidzo uye iyo yekuvhara mhinduro nguva ingangoita 2 masekondi zvishoma zvishoma pane iyo foni kamera kamera.
Iyo Sense 500 yakakwanisa kundipa mazuva mana-ehupenyu hwebhatiri neavhareji yekushandisa uye iyo kambani inoti unogona kusimuka kusvika kumazuva gumi nemashanu enguva yekumira. Iyo yemagineti yekuchaja pini inoshanda nemazvo uye iyo yekuchaja waya zvakare inonzwa yakasimba. Dambudziko rimwe richasangana nevashandisi nderekuti iwe hauchakwanise kuziva kuti ingani muzana yechaji yakapedzwa pawachi apo pini yekuchaja inoramba yakabatana. Izvo zvakare hairatidze bhatiri muzana mune mazhinji emawadhi ekumeso saka uchafanirwa kugara uchiteedzera bhatiri rako nguva dzose.
Ini handitengeswe zvachose pane fungidziro yekuti iri rakanakisa bhajeti smartwatch muchikamu che-sub-5000, zvisinei, ndeimwe yeakanakisa kunze uko. Iko pa-bhodhi yekufona ficha ndiyo mukana wakakura unounzwa neSense kune vashandisi uye dhizaini iyi chinhu chaungade kuve nacho pamaoko ako.
PaRs 4,499, iyo Sense 500 yakanaka sarudzo yekufunga kana iwe usiri kuda kushandisa yakawanda. Yeye-yekupinda-chikamu gizmo, izvi zvinopa hukuru hukuru hwemari uye inoratidzirwa-yakazara. Iyo inogona kunge isiri iyo yakanyanya kunaka sarudzo yeiyo fitness yekutevera gizmo asi kana iwe uchitsvaga yakanaka smartwatch ruzivo mukati mebhajeti saka iwe unofanirwa kunyatso funga iyo Sense 500.